Gunsel B9 Ayaa Lagu Soo Bandhigay Gawaarida Guriga ee TRNC | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya90 TRNCGunsel B9 Waxaa Lagu Soo Bandhigay Gawaarida Guriga ee TRNC
21 / 02 / 2020 90 TRNC, Aasiya, DUNIDA, GUUD, WADADA, Headline, baabuurta
qoryaha darandooriga u dhaca ee kktc b
“Günsel”, oo ah gaariga gudaha iyo midka qaran ee Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus, ayaa lagu soo bandhigay hay'ad lagu qabtay Xarunta Kontoroolka ee Girne Elexus. Moodeelkii ugu horreeyay ee Günsel, oo ay soo saareen injineerro reer Turki ah iyo naqshadeeyayaal leh 10 sano oo shaqo ah iyo 1,2 milyan oo saacado shaqo ah oo ka dhex jira jirka Jaamacadda Bariga East, ayaa waxaa laga soo saaray jaale, buluug iyo midab casaan ah oo astaan ​​u ah ciidda, cirka iyo calanka TRNC. Nashqadeynta iyo naqshadaha gudaha ee Günsel B9 aad ayaa loo bogaadiyay.
Raiisel wasaare Ersin Tatar, Madaxweynaha 3aad Dr. Derviş Eroglu, Republic of Ambassador Turkey ee Nicosia, Ali Murat Başçer, Ra'iisul Wasaare Ku xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibedda Kudret Ozersay, Wasiirka Waxbarashada Nazim Turkiga, Wasiirka Maaliyadda baaluq Amcaoğlu, Wasiirka Arrimaha Gudaha Aysegul Baybars Kadri, Public Works iyo Wasiirka Gaadiidka Tolga Atakan, Dhaqaalaha iyo Wasiirka Tamarta Hassan Taçoy, Wasiirka Dalxiiska iyo Deegaanka DT. Ünal Üstel, Wasiirka Beeraha iyo Kheyraadka Dabiiciga Dursun Oğuz, Wasiirka Shaqada iyo Amniga Bulshada Faiz Sucuoğlu, Xisbiga Mucaaradka ugu weyn ee Xisbiga Jamhuuriga Turkiga Tufan Erhürman, Taliyaha Ciidamada Nabadsugida Qubrus Gaashaanle Sare Sezai Öztürk, Taliyaha Ciidamada Amniga Tuğgeneral Altan Er iyo Madaxweyne kuxigeenka Golaha Jamhuuriga Zorlu Ku dhawaad ​​3 kun oo marti ah oo ka kala yimid dalka Turkiga iyo dibaddiisa ayaa ka qeybgalay habeenka dhiirrigelinta ee Günsel, oo ay ka qeybgaleen Töre.
U dhow Jaamacada Bariga, Gudoomiyaha Gudiga Ammaanada Dr. İrfan Suat Günsel: “Aabaheenna waa Dr. Riyada Suat Günsel; Qaab dhismeedka oo wadajir ah, waxaan dhabtii u rogiay run ahaantii annagoo shaqeynayna habeen iyo maalin isku jidh, hal qalbi, iyo iimaan weyn. ”
U dhow Jaamacada Bariga, Gudoomiyaha Gudiga Ammaanada Dr. İrfan Suat Günsel ayaa khudbad ka jeediyey habeenkii halkaas oo lagu soo bandhigay Günsel B10, oo ay soo saareen injineero Turki ah oo leh 9 sano oo R&D ah iyo daraasado naqshadeyn ah. Riyada Suat Günsel; Naqshad ahaan ilaa R&D, ka teknolojiyadda ilaa injineernimada, waxaan u beddelnay xaqiiqada annaga oo shaqeynayna habeen iyo maalin hal jidh, hal qalbi, aamin weyn. Waxaan ku nool nahay sharafta, karaamada iyo farxadda in aan awoodno in aan idin la wadaagno GÜNSEL adiga, qarankeenna, dalkeenna iyo waddankeenna iyo in aan si xoog leh dunida ugu bandhigno adduunka. ”
Muujinta in xaqiijinta mashruuc weyn sida Günsel uu yahay mid ka mid ah tusayaasha ugu qiimaha badan ee soosaarista sayniska ee Jaamacadda Bariga. Dr. İrfan Suat Günsel wuxuu yidhi, “U dhow Jaamacada Bariga iyo Jaamacadda Girne waxay noqdeen jaamacadaha ugu waaweyn uguna horumarsan juqraafi ahaan waxayna kaalintooda ka qaateen jaamacadaha adduunka ee la ixtiraamo. Waxay leedahay kaabayaasha tikniyoolajiyada iyo qalabka tacliinta ee fulin doona isla waqtigaas, ku dhawaad ​​laba kun oo maqaal oo lagu daabacay joornaalada caalamiga ah ee la taxay iyo 385 mashruuc oo hada socda. "
Awoodda waxsoosaarka ee Günsel, oo wax soo saarkooda taxanaha ah ay bilaaban doonto 2021, ayaa gaari doonta 2025 kun oo gaari sanadkii sanadki 20. Habeenimadii la bilaabay G ofnsel moodelkeedii ugu horreeyay ee B9, ayaa dalacsiinta dhiirrigelinta ee noocii labaad ee J9, oo si qarsoodi ah loo hayey ilaa maanta, ayaa loo soo bandhigay martida. Habka horumarineed ee J9, oo loogu talagalay inuu yahay “SUV”, ayaa la qorsheeyay in la dhammeeyo 2022 oo dhiirrigelinta tusaalaha ah ayaa la qorsheeyay. U dhow Jaamacada Bariga, Gudoomiyaha Gudiga Ammaanada Dr. Soo bandhigista İrfan Suat Günsel habeenimadii xalay, waxaa la sheegay in waxsoosaarka ballaaran ee mashiinka labaad J9 uu bilaaban doono 2024.
Beddelka Günsel ee Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus mid ka mid ah wadammada dhoofinta gawaarida ayaa wax weyn u horseedi doonta dhaqaalaha dalka. Dhinac, Günsel wuxuu siin doonaa dakhli dhoofinta ugu badan TRNC baabuurta ay u dhoofin doonto dibada, iyo keydka shidaalka ee ay bixinayso Günsel, oo loo isticmaalo gudaha, si weyn ayey u yareyn doontaa xaddiga shidaalka la soo dejiyo. Sababtaas awgeed, Günsel wuxuu leeyahay awood uu si weyn ugu dhimayo hoos u dhaca ku yimid ganacsiga shisheeye isagoo sameeynaya ku biirin tabaruca dhaqaalaha TRNC. Dakhliga dhoofinta ee uu abuuri doono, dhaqaalaha lagu dhisi doono warshadaha alaabooyinka gawaarida keena iyo shaqooyinka la siinayo ayaa Günsel ka dhigaya mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha TRNC.
Raiisel wasaare Ersin Tatar: Waxaan nahay jamhuuriyada Turkiga ee Waqooyiga Qubrus, waxaan soo marnay magacyo waaween iyo geesiyaal waa weyn. Qof walba waa inuu qirayaa in Suat Günsel, oo sanado badan shaqeynayay tan iyo halganka, kana shaqeynayay Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus, inuu ka mid yahay geesiyaashan. Waxa jira arimo badan oo taban oo ku saabsan Qubrusheenna Badda bari. Sheekada guusha halkan lagu saxeexay waxay ka nixisay dadka hadalka xun. Sababtoo ah waan guuleysaneynaa, waxaan nahay carruurta guuleysata ee ummad guuleysata, oo dalkiisa qabsada, rumeysta kaamilnimada oo leh hibo. Halkan waxaa ah Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus! Maanta waxaan marag u nahay taariikhda. Günsel wax weyn ayey ka tari doontaa dhoofinta, shaqada, dhaqaalaha iyo horumarka dalkeenna. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Günsel Family, oo gaadhay guulahan weyn. ”
3. Madaxweynaha TRNC Derviş Eroğlu: Waxaan aasaaska u dhignay Jaamacada U dhow East Suat Günsel intii aan ahaa raiisel wasaaraha. Laga soo bilaabo maalintaas, dhul aad u badan ayaa dhigay Suat Günsel iyo qoyskiisa oo aan illaawin lambarka. Suat Günsel waxay si wanaagsan u raacday mashruuc kasto oo ka socda jaamacad ilaa isbitaal. Günsel Family wuxuu ku faani karaa oo keliya mashaaricda ay saxeexu ku kordheen. Guushaadu ha ahaato weligeed.
Ambassador of the Republic of Turkey Ali Murat Başçer of Nicosia: Suuqa baabuurta adduunka ayaa maray isgoysyo cusub. Madaxweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, gaari gudaha Turkiga sida uu sheegay kulanka on December 27 tOGGer maanta soo bandhigay, qof kasta waa loo siman yahay galaya tartanka this. Günsel, oo ay saxeexday Jaamacadda Bariga East, ayaa u abuuri doonta tusaale muhiim u ah horumarinta teknolojiyada, R&D, iyo mashaariicda warshadaha ee dhammaan jaamacadahayaga. Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii soo shaqeeyey ee gacan ka geystey. ”
Tufan Erhürman, Madaxweynaha Xisbiga Jamhuuriga Turkiga: Maanta waxaan aragnaa riyo rumowday halkan. Waxaan u soo bandhigayaa mahadsanidiin dadkii soo maray kibarkan. Anigoo booqanaya xarumaha wax soo saarka, waxaan arkay Injineero dhalinyaro ah oo si xamaasad leh u shaqeynaya bilowga shaqadooda. Waan u mahadcelinayaa dhammaantood. Waxaan had iyo jeer dhahnaa in soo-saareyaashu ma baabi'i doonaan. Günsel Family wuxuu sii wadaa hirgelinta mashruucyada la yiraahdo wax aan macquul aheyn. Waxaan dhamaantiin ugu hambalyeynayaa qoyskoo dhan guusha ay gaadhay. ”
Kudret Özersay, Raiisul wasaare ku-xigeenka iyo Wasiirka Arimaha Dibadda: “Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus iyo dadkeedu waxay u baahan yihiin hal sheeko guul in kabadan. Günsel sidoo kale waa sheeko muhiim ah oo dhiirigelin leh. Anigoo ku hadlaya magaca gobolkayaga, waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo qof kasta oo saxeexay sheekadan guusha, gaar ahaan qoyska G thensel. Maalgelinta noocan ahi waxay u baahan tahay aragti weyn. Iyada oo ay weheliyaan G ,nsel, waxay soo bandhigeen sida ay u weyn yihiin himilooyinka Günsel iyo himilooyinkii Jaamacadda Bariga ee u dhow.
Hasan Taçoy, Wasiirka Dhaqaalaha iyo Tamarta: “Günsel waa mashruuc weyn oo loogu talagalay dhaqaalaha dalkeena waa inaan rumeysanno oo aan ilaalinaa illaa dhamaadka. Suat Günsel, oo dalkeenna qiimo aad u muhiim ah u keentay illaa imminka, waxay waddankeenna qiimo weyn u keentay iyagoo ku riyoonaya macallinkeeda iyo qoyskeeda isla markaana aad ugu dadaala sidii ay u rumeysan lahaayeen riyadan. Adduunku waa is beddelaa. Waa mid aad u soo jiidasho leh in la helo mashruuc baabuur koronto oo laga soo saari doono qorraxda oo loo isticmaali doono sidii dal qoraxeed. Sidaa darteed, waa inaan ilaalinaa mashruucan, oo aan goob joog ka ahayn inuu riyo rumowdo.
Wasiirka Shaqada iyo Amniga Bulshada Faiz Sucuoğlu: “Sannado kahor, Suat Günsel ayaa lahadley macalinkayga wuxuuna ii sheegay in maalin un uu soo saari doono gaari. Markii aan u sheegay in aysan sahlaneyn, wuxuu igu yiri waxaan rumeysan doonaa riyadayda. Halkan waxaan ku aragnaa xaqiijinta riyadan. Sheekada Günsel, oo ka bilaabatay 10 injineer isla markaana ay sii waddo ilaa 100 injineer maanta, waxay gaari doontaa kumanaan injineer sanadaha soo socda. Günsel wuxuu wadada u xaari doonaa sidii aan ugu hayn lahayn dhallintayada ku nool waddanka shaqooyinka ay abuuri doonto isaga oo gacan ka geysan doona yareynta heerka shaqo la'aanta dhalinyarada, oo maanta gaaray dalkeena 19.
XAALADAHA LAGU SAMEEYO
Moodhka koowaad ee Günsel B9 waa baabuur koronto boqolkiiba 100 ah. Gawaarida, oo ku safri kara 350 kiiloomitir hal kharashaadka, waxaa lagu soo saaray isku darka 10 kun 936 gogo '. Mashiinka gawaaridu waa 140 kW. Xadka xawaaraha ee Günsel B100, oo gaari kara 8 km saacaddiiba 9 ilbiriqsi, wuxuu elektaroonig ahaan xadidan yahay 170 km saacaddii. Batroolka 'Günsel B9' waxaa lagu dallaci karaa 20 daqiiqo oo keliya markii uu xawaare sare ku socdo. Haddii lacag bixinta caadiga ah la isticmaalo, markan waa 7 saacadood. Habka horumarinta, heshiisyo ayaa lala saxeexday 100 oo alaab-qeybiyeyaal oo ka kala socda 1,2 dal oo ku saabsan soosaarka Günsel B9, halkaasoo in ka badan 28 injineerro ay ku qaateen 800 milyan oo saacado shaqo ah.
Gawaarida korontada ku shaqeeya waxay kordhinayaan culeyskooda suuqa baabuurta adduunka sanad walba. Tirada gawaarida korontada ku iibisa adduunka 2018 waxay ahayd 2 milyan. Iibinta gawaarida korantada, oo la filayo inay gaarayaan 205 milyan sanadka 10, ayaa la filayaa inay gaarayaan 2030 milyan sanadka 28 iyo 2040 milyan sanadka 56. Gawaarida korantada ayaa qabsan doona 2040 boqolkiiba suuqa baabuurta sannadka 57.